यी युवतीको बारेमा जानेर उड्नेछ तपाईको होस, 'भुरी डन' नामबाट चर्चित!
यी युवतीको बारेमा जानेर उड्नेछ तपाईको होस, ‘भुरी डन’ नामबाट चर्चित!
फागुन २४, २०७४ बिगुल न्यूज- SG
एजेन्सी, अपराधको दुनियामा एक युवतीको नाम अगाडी आएको छ। यस्तो एक नाम जसलाई सामाजिक संजालमा ‘भुरी डन’ भनेर चिनिन्छ। यी युवती पछिल्लो केहि दिनयता तरवार-चक्कु लिएर सहरको गल्लिमा घुमिरहेको देखिन्छ। उनको भिडियो पनि भाइरल भएको थियो। त्यसपछि पुलिसले अनुसन्धानको आदेश दिएको थियो। अनुसन्धानमा पत्ता लागेको छ कि भिडियोमा देखिएको मानिस अरु कोहि नभएर अस्मिता गोहिल अर्थात् ‘भुरी डन’ हुन् ।
‘भुरी डन’ नामबाट चर्चित छिन् अस्मिता:
सौराष्ट्रको ऊना शहरमा बस्ने अस्मितालाई मानिसहरु ‘भुरी डन’ नामले चिन्छन्। अस्मिताकी पाँच बहिनीहरू छन्, तर उनी अपराधको संसारमा चिनिने परिचित नाम हो। केहि वर्ष पहिले वराछा सहरमा भएको तीन हत्या प्रकरणमा अस्मिताको नाम अगाडी आएको छ। हुनत आरोप साबित नभएको कारण उनलाई छोडिएको छ। यस घटनापछि हत्या, लुटपाट र आक्रमण जस्ता घटनाको आरोपी संजय भएको छ। संजय र अस्मिताको मित्रता यति बढेको छ कि उनीहरु लिभ इन टुगेदरमा बसे। बताईएअनुसार एक हत्या घटनामा संजयलाई हालै रिहा गरिएको छ। दुवैले लुटपाट र मारपिट जस्तो धेरै कार्यहरु गरे। त्यसैले अस्मिता सहरमा ‘भुरी डन’ नामले चर्चित भईन।
प्रकाशित : बिहिबार, फागुन २४, २०७४१९:३५
बुहारीले ससुराको ओठमा चुम्बन गर्नुपर्ने यो कस्तो अनौठौ संस्कार (भिडियो सहित)
पृथ्वी कै सबैभन्दा ठुलो खाडलः जहाँबाट वर्षेनी निस्किन्छ २ खर्व ८० करोड भन्दा बढीको हिरा
सपनामा आफ्नो टाउकोको सबै कपाल झरेको देख्नु भएमा हुनेछ यस्तो खतराको संकेत !
यस देशमा हुन्छ पुरुषहरु माथि बलात्कार !
करिब १५० वर्ष अगाडी कस्तो थियो काठमाडौँ ? हेर्नुस् भिडियो
यसकारण कट्टर ब्राह्मणहरु खादैनन् लसुन प्याज
२० सेकेन्ड अगाडि पत्रपत्रिका